Ny fiantsenana dia mahafinaritra any Kambôdza | Vaovao momba ny dia
Ny fiantsenana dia mahafinaritra any Kambodza
Mariela Carril | | Kambodza, General, Fitsangatsanganana any Azia
El Fanjakan'i Kambodza dia firenena kely izay atsimon'ny saikinosy Indochina ary anisan'ny ny ankamaroan'ny toerana fizahan-tany any Azia atsimo atsinanana.
Raha resaka fiantsenana dia tsy maintsy fantatsika fa i Kambodza Tsy toeram-pivarotana toa an'i Thailand izy io., ohatra, nefa mbola afaka mitondra fahatsiarovana sy fanomezana maro isika. Ny fanontaniana dia inona no vidiana ary aiza ka soraty ireto torohevitra ireto.
1 Vidio any Kambodza
2 Inona no vidiana any Kambodza
3 Aiza no hividianana any Kambôdza
Vidio any Kambodza
Kambodza tsy Mekah miantsena izany satria tsy ampy fotodrafitrasa izay ananan'ny mpifanolobodirindrina aminao. Tsy hahita toeram-pivarotana lehibe na trano fanaovana tranobe lehibe misy fivarotana ao anatiny ianao, fa manana tsena marobe izy io ka raha hividy asa-tanana dia toerana tsara haleha.
Ny zavatra faharoa tokony ho fantatrao raha tianao mandeha miantsena toy ny mpizahatany na toy ny eo an-toerana. Raha tianao ny traikefa nahitana dia ny tsena eo an-toerana sy ny magazay kely no tsara indrindra, raha tianao ny maoderina dia mankanesa any amin'ireo foibe fiantsenana.
Ny mahasamihafa ny toerana roa dia ny vidiny: any amin'ny toeram-pivarotana dia avo kokoa ny vidiny ary tsy afaka mihantsy na inona na inona ianao. Ho an'ny traikefa ara-kolotsaina lehibe, ny torohevitro dia ny tsy hanadino ireo tsena.
Inona no vidiana any Kambodza
Nanomboka ny taona 80 dia nanentana ny mponin'i Kambodza ny governemanta sy ny fikambanana sasany mba hahita indray ny talentan'izy ireo amin'ny maha mpanao asa tanana sy mpanenona azy ireo.
Fandaharana fanarenana maro no novolavolaina ary afaka namolavola asa-tanana nasionaly toa ny landihazo na landy lamba, rattan, volotsangana, tanimanga na hazo noforonina.
Ireo fandaharam-pamporisihana ho an'ny asa tanana eto an-toerana dia nahatonga ireo zavatra hitantsika eny amin'ny tsena sy ny toeram-pivarotana. fanaka, akanjo, kitapo, poketra, sary hosodoko sy ny sisa
Manampy ireo ny fahagola, ny harona wicker, ilay mahafatifaty boaty betel, ny vato soa, ny haingon-taratasy taratasy, ny zavatra volafotsy, fananganana sary sokitra Bouddha mahazatra ary ny tava krama izay tenenin'ny vahoaka Khmer.
Aiza no hividianana any Kambôdza
Miankina amin'ny tanàna na faritra aiza no misy anao ao amin'ny firenena: any an-drenivohitra na Siem Reap, amin'ny ankapobeny.
Andao atomboka amin'ny renivohitra. Voatonona anarana anarana Pen fa mety ho hitanao koa voasoratra hoe Phnom Penh. Tamin'ny fotoanan'ny fibodoana frantsay dia noheverina ho iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Indochina.
Ny fiantsenana dia hetsika isan-karazany. Misy tsena telo lehibe ary avy eo tsena kely kokoa sy tsena nentin-drazana hafa izay amidy ny zavatra hohanina isan'andro. Misy koa toeram-pivarotana maro, tsena kely, Super tsena, fivarotana landy, fivarotana fahatsiarovana, boutique ary toerana ara-barotra isan-karazany.
Ny vidiny dia matetika amin'ny dolara amerikana ary ankehitriny dia fivarotana maro no mandray carte de crédit. ihany mety foana ny manova vola satria ny haggling dia ao amin'ny magazay kely.
El Tsenan'alina amin'ny anarana Pen Eo amoron'ny renirano izy io ary toerana tsara hividianana fahatsiarovana, asa-tanana, akanjo ary te hahafanta-javatra isan-karazany. Misokatra ny zoma sy faran'ny herinandro manomboka amin'ny 5 hariva ka hatramin'ny misasakalina (Sisowath Quay, eo anelanelan'ny 106 sy 108).
El Tsenan'ny Olaimpika Akaiky ny Kianja Olaimpika izy io ary wholesales ka io no tena tianao eto an-toerana. Afaka mahita ianao fihenam-bidy tsara ka atoro anao.
El Tsena rosiana Izy io dia mivarotra kely amin'ny zava-drehetra: asa tanana, elektronika, fahagola, sary sokitra hazo, zavatra vita amin'ny landy ary akanjo amin'ny vidiny lafo. Izy io koa dia mivarotra firavaka fa tsy maintsy hainao ny manavaka ny sandoka amin'ireo tsara.
Mikasika ireo ivon-toeram-pivarotana dia misy ny Lucky Sipermarse, ny rojo lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Marika nasionaly sy avy any ivelany no ho hitanao amin'ireo rantsany rehetra.
El Mall Sorya Tranobe manana endrika roa ambin'ny folo andrefana misy trano fisakafoanana sy fivarotana maro io. Amin'ny 63rd Street no misy azy, sakana iray avy eo amin'ny tsena afovoany, ary manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 alina
Mikasika ireo magazay dia betsaka ary tsy azo atao ny miresaka momba azy rehetra, fa holazaiko anao izany ny ankamaroan'ny fivarotana dia manodidina ny tsena afovoany, amin'ny velaran'ny arabe 178, 240, 51 ary 282.
Izy ireo dia mampifantoka ny tolotra ho an'ny mpizahatany amin'ny resaka sary sokitra bodista, landy, firavaka, fahatsiarovana ary sarivongana: Cfaikany Artisan, Kashaya Silk, Bliss, Ny Lezard Manga manga sy balsama tsena dia sasany amin'ireo fivarotana azonao tsidihina.
Raha te hanampy ianao ankoatry ny fividianana dia afaka mankany Rehab Craft Kambodza izay fikambanana tsy mitady tombontsoa izay an'ny Kambodziana manana fahasembanana.
Manao firavaka volafotsy, sary sokitra hazo, akanjo, akanjo landy izy ireo ary maro hafa. Azonao atao aza ny mitsidika ilay atrikasa. Amin'ny 322, 10A Street no misy azy ary misy ihany koa fivarotana antsinjarany amin'ny 278 1A Street. Misokatra manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 5 hariva
Fa ahoana fivoahana fiantsenana Siem Hitondra o Siem Riep? Io no renivohitry ny faritanin'i Siem Riep ary valo kilometatra monja miala an'i Angkor taloha. Izay no mahatonga ny mpizahatany foana.
Ireto misy galeriana zavakanto, boutique lamaody, fivarotana fahatsiarovana ary karazana maro firavaka, zavatra volafotsy, tarehimarika lacquered, sary sokitra vato sy hazo, seramika sy ny sisa
Ny tsena tsara indrindra dia mifantoka ao afovoanyMisokatra isan'andro izy ireo ary mivarotra ny zava-drehetra. Tsena misokatra ireo izay misy ny fivarotana sakafo sy fampisehoana ataon'ny buskers. Haggling dia ofisialy.
Ilay Tsenan'ny arabe Angkor miaraka amin'ireo fivarotana volotsangana 200 izay mivarotra izay novokarin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana: akanjo, sary hosodoko vita amin'ny landy, saribakoly, kitapo vita amin'ny akora namboarina, sary sokitra hazo ary volafotsy.
El Tsena taloha na Phsar Chas Io no tranainy indrindra amin'ny rehetra ary mivarotra zavatra sy sakafo isan'andro, manomboka amin'ny akanjo sy firavaka ka hatramin'ny lasopy, vary, mofo ary sahona endasina. Misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 hariva
Etsy ankilany, isaky ny sabotsy, alahady ary talata dia manokatra tsena ivelany antsoina hoe Made in Kambodza. Misy mpanao asa tanana eto an-toerana ka ny kalitaon'ny akanjo, firavaka, sary hosodoko ary kilalao no avo kokoa noho ny amin'ny tsena hafa. Ary koa ny vidiny, nefa mendrika izany satria mividy kalitao ianao.
-sangan-tanana asa tanana siem-
Farany, raha tianao ny asa-tanana nefa te hividy azy ireo mivantana amin'ireo mpanao asa tanana dia azonao atao ny mitsidika ny Fikambanan'ny mpanakanto an'ny Angkor. Manolotra atrikasa sy foara misy toeram-pivarotana 20 izy io izay mahatratra 100% ny mpivarotra. Ao anatin'ny vohitr'i Training, amin'ny zotra 60.
Mazava ho azy fa betsaka kokoa ny toerana hiantsenana any Kambôdza, saingy ireo no fototra sy atolotra indrindra amin'ireo tanàn-dehibe roa mpizahatany. Aza hadino ny mihetsiketsika foana, aza mijanona amin'ny vidiny voalohany lazain'ny mpivarotra aminao ary aza mividy firavaka mihitsy raha tsy hainao ny mamantatra ny tena izy amin'ireo sandoka. Aoriana, fahafinaretana ny fiantsenana any Kambodza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Kambodza » Ny fiantsenana dia mahafinaritra any Kambodza
Tsidiho ny Hobbiton any Nouvelle Zélande
Ny Bull of Wall Street